Global Voices teny Malagasy » Mifototra Amin’ny Inona Ireo Fiampangana Ho Maniratsira Ao Afovoany-Atsinanana? (Tsy fivavahana fotsiny izany) · Global Voices teny Malagasy » Print
Mifototra Amin'ny Inona Ireo Fiampangana Ho Maniratsira Ao Afovoany-Atsinanana? (Tsy fivavahana fotsiny izany)
Voadika ny 14 Febroary 2019 12:50 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika (fr) i Thalia Rahme, Sylvia Aimée
Sokajy: Arabia Saodita, Maoritania, Tonizia, Fahalalahàna miteny, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Teratany, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Janoary 2015)
Sariitatra fanohanana an'i Jabeur Mejri, avy amin'i Fey
Ny 24 desambra 2014, noho ny lahatsoratra iray navoakany tamin'ny tambajotra, herintaona mahery izay, dia voaheloka ho faty tao amin'ny toerana famonoana  i Mohamed Cheikh Ould Mohamed, maoritaniana blaogera. Io no fanamelohana ho faty voalohany indrindra noho ny fivadihana finoana tao Maoritania hatramin'ny nahazoany fahaleovantena tamin'ny taona 1960.
Tao anatin'ny lahatsorany  voasoratra tamin'ny teny arabo ary mitondra ny lohateny hoe “Antokom-pînoana, ny maha-mpivavaka sy ireo mpanao asatanana”, kianin'i Cheikh ny rafitra mpanavakavaka izay manjaka ao amin'ny fireneny. Ampifandraisiny amin'ireo zavatra hafa mitovitovy aminy ireo fomba ireo izay mety efa nisy hatramin'ny fotoanan'ny mpaminany Mohammed. Samihafa ny fandikàna ny hevitry ny teniny ary izany no antony niampangàna azy ho nanevateva ny mpaminany.
“Ny raharaha an'i Cheikh” dia tsy inona akory fa fikasana mba hanampenam-bava izay rehetra mety manohintohina ny rafitra napetraka na najoro eo ambonin'ny famoretana sy ny fanaovana ny fivavahana ho fitaovana “, hoy ny bitsik’ i Saidou Wane, maoritaniana mpikatroka manohitra ny fanandevozana sy ny fanavakavahana.
Tsy inona akory ilay tovolahy 28 taona fa iray amin'ireo hafa marobe niharam-boina noho ny nataon'ny governemanta mpamoritra ao amin'ny firenena iray izay miozolomana no betsaka ao aminy, mety mipetraka, marina na tsia, ao ambadiky ny “fivadiham-pinoana” sy ny “fitenenan-dratsy ny fivavahana” mba hamoretana an'ireo izay mety hitaky fiovàna na mety hanao fanambaràna politika ampahibemaso. Amin'ny alalan'ny fanamelohana an'i Mohamed Cheikh hizaka ny sazy faratampony, milaza ireo tomponandraikitra maoritaniana fa te-hiaro ny finoana Silamo na tena ny Mpaminany ihany koa. Saingy tena azo vinaniana fa io sazy io dia ho ampiasaina mba hiarovana ny rafitra sy hitehirizana azy tsy ho voakitika amin'ny tsikera politika.
Raha maneho hevitra  tamin'izay nanjo an'i Cheikh, ny mpanao gazety Brian Whitaker, mpanoratra ny Arabs Without God  (Arabo tsy misy Andriamanitra), dia nanamarika fa navadika ho “fitaovana politika” ny fivavahana ao Maoritania:
The strange thing about laws against apostasy and blasphemy is that most of the people who fall foul of them are neither apostates nor intentional blasphemers. In practice these laws have very little to do with theology and are mostly used as a pretext for settling political scores or pursuing personal grudges.
Ny zavatra hafahafa ao anatin'ireo lalàna manohitra ny fivadiham-pinoana sy ny fitenenan-dratsy ny fivavahana dia ny hoe ny ankamaroan'ireo izay milanja ilay zioga, dia sady tsy ireo mpivadika finoana no tsy ireo mpiteny ratsy sy mpanao fanahy iniana. Raha ny tena zava-misy, tsy dia misy hifandraisany loatra amin'ny teôlôjia ireo lalàna ireo ary amin'ny ankamaroan'ireo tranga misy, dia tsy mampiseho afatsy sarintsarin'antonjavatra ho an'ireo valifaty ifanaovana ara-politika mba handravonana ireo lonilony manokan'ny tena.
Mampiasa ny fivavahana ho toy ny “antonjavatra mba handravonana ireo disadisa politika”
Soritan'i Whitaker io tranga io ho toy ny firehana ankapobenyao anatin'ny tontolo Arabo. Noho izany, nandritra ireo taona maro farany, i Arabia Saodita sy i Tonizia, sarahan'ny elanelana be ara-kolontsaina sy ara-politika, dia efa niaina tamina trangan-javatra mitovitovy amin'izany.
Ao anatina rafitra governemanta teokratika mitovy amin'io hita ao Arabia Saodita io, somary manjavozavo ny tsipika manasaraka ny fivavahana sy ny politika. Noho izany, ireo izay maetraka fanontaniana momba ny tsy fiovan-javatra na mitsikera an'ireo tomponandraikitra dia iharan'ny fiampangana henjana noho ny antony ara-pivavahana (fa tsy politika).
Ahoana no fomba hanifihan'ny fitondrana an'ireo mpanaratsy sy ireo mpifanandrina ara-politika any amin'ireo faritra izay ny fivavahana no mitana andraikitra lehibe indrindra amin'ny fiainan'ny ankamaroan'ny olom-pirenena? Fomba iray hahatongavana amin'io tanjona io ny fampidirana azy am-ponja sy ny filazana fa nanompa ny finoana silamo sy ny mpaminany ry zareo. Amin'izay fomba izay, (saika) tsy misy mihitsy olona hanavotra azy ireo.
Sary novoizin'ny Amnesty International, tao anatin'ilay fanentanana ho fanohanana an'i Raif Badawi
Tamin'ny lohataona farany teo, i Arabia Saodita dia nanameloka blaogera iray, Raif Badawi , hifonja 10 taona an-tranomaizina miaraka amin'ny vely karavasy in-1000 noho ny “fanompana ny finoana silamo”. Raha ny marina, i Badawi no nanorina ny “Saudi Liberals” na ireo “Saodiana Liampivoarana” vohikala iray izay ny feo sy ny vontoatiny dia mitsikera an'ireo mpitondra fivavahana manankaja ao amin'ny firenena sy ny polisim-pinoany. Tsy tena nanisy tsindrim-peo mikasika ny finoana silamo akory ny vohikala, saingy kosa manondro an'ireo mpanao politika sy ireo olom-pinoana voafaritra mazava tsara, manasongadina tsara ny asan”izy ireo. Na izany aza, mbola voampanga ho “nanompa ny finoana silamo” ihany i Badawi.
Vehivavy mpisolovava sady mpikatroka ho an'ny zon'ireo vehivavy, Souad al-Shammari  no nibitsika nanohitra ny rafitra fiahiana natao ho arahan'ireo vehivavy ao amin'ny fireneny. Raha ny marina, mba hahafahana miasa, mandeha na manambady ihany koa, tsy maintsy manana fahazoandalana avy amina lehilahy mpanaramaso iray ny vehivavy iray. Vokatr'izay, voampanga ho naneso an'ireo lahatsoratra masina sy ny mpitondra fivavahana i Souad Al Shammari
Ao Tonizia, izay tsy ahitana lalàna manasazy ny fitenenan-dratsy ny fivavahana na ny fivadiham-pinoana, voaheloka fito taona sy tapany tany an-tranomaizina ireo mpisera roa, Jabeur Mejri sy Ghazi Beji tamin'ny taona 2012, noho ny nanomezany endrika ny mpaminany Mahomet teo amin'ny Tambajotra. Tsara marihina fa olontsotra mpisera ry Mejri sy Beji fa tsy mpikatroka ara-politika akory.
Afaka nandositra ny fonja tamin'ny alalan'ny fandosirana ny fireneny i Ghazi Beji talohan'ny nahasamborana azy. Fa tetsy andaniny kosa, nihiboka roa taona tany am-ponja i Jabeur Mejri mialohan'ny nanafahana azy tamin'ny volana martsa lasa teo, nahazo famotsoran-keloka avy tamin'i Moncef Marzouki, filoham-pirenena mpisolo toerana fahiny tao Tonizia.
“Tsy heloka bevava ny fitenenan-dratsy ny fivavahana. Mazava be ao anaty Koràny ny fahalalahana hisafidy ; voalaza ao fa: “Tsy misy fanerena amin'ny fivavahana”. Io no nampatsiahivin'i Rached Ghannouchi, filohan'ny hetsika silamo Ennahdha Tunisie, nandritra  ny hetsika iray tao Washington D.C., Etazonia, tamin'ny volana jona 2013.”
Saingy tao Washington, fa tsy tao Tonizia i Ghannouchi no nanao io lahateny io. Nahoana no lazainy fa “tsy heloka bevava ny fitenenan-dratsy ny fivavahana” nefa nalefa any am-ponja i Mejri, na ihany koa ny Ennahdha izay antokony no nanolotra lalàna iray izay hanasazy” ny fanohintohinana ny masina”?  Na i Ghannouchi, na ireo antoko avy amin'ny ankolafy laika na ny antoko ankavia dia samy tsy nisy nitolona ho an'ny famotsorana an'i Mejri ary io dia noho ny tahotra ny mety ho fihetsik'ireo mponina mpandala ny fomban-drazana sy mba tsy hampandositra ireo tokony mpifidy azy.
Inona no hevitry ny Koràny mikasika ny fitenenan-dratsy ny fivavahana?
Sahala amin'ny toa tsy raharahian'ireny governemanta ireny ny zava-misy, izay hoe na tsy mamporisika ny fitenenan-dratsy ny fivavahana aza ny Silamo, mbola azo leferina ny fanaovana azy io. Raha ny marina, tsy hita na aiza na aiza ao anaty Koràny ny sazy mahakasika ny fitenenan-dratsy ny fivavahana.
Nenjehina sy nataon'ireo mpiarabelona taminy ratsy fitondra ny mpaminany Mahomet sy ireo mpanaraka azy voalohany. Notatazan-dry zareo ny ompa, esoeso ary fanendrikendrehana. Nefa nandidy azy ireo ny Koràny mba hanana faharetana sy hanalavitra an'ireo adihevitra miaro fitenenan-dratsy ny fivavahana fa tsy hanameloka azy ireny.
Azo antoka fa ho tsaraina amin'ireo fanananao sy maha-olona anao ianao ; ary azo antoka fa, ho renao avy amin'ireo izay notolorana ny Boky talohanao, sy avy amin'ireo Mpikambana, ireo teny marobe tsy mampahazo aina. Saingy raha miorim-paka sy tia vavaka ianao… izay no vahaolana tena tsara raisina indrindra. [Sourate 3, toko 186]
Rehefa mahita an'ireo olona mitsabatsabaka ao anaty adihevitra [manafintohina] momba ny toko-Ntsika ianao, manalavira azy mandra-panovan-dry zareo ny adihevitra. Ary rehefa ataon'ny Devoly izay hanadinoanao, vantany vao tadidinao, aza mijanona miaraka amin'ireo tsy marina [sourate 6, toko 68]
Mitovy amin'izay koa ny mikasika ny fivadiham-pinoana. Tsy mamoaka sazy, na iray aza, ho an'ireo izay manapa-kevitra ny hivadika ho amina finoana hafa noho ny silamo ny Koràny, eny fa na dia tsy hitodika aminà finoana itsy sy iroa intsony aza. Ao anatin'io fotokevitra io, azo vakiana ao anatin'io boky masina io hoe “Tsy misy fanerena amin'ny fivavahana” sy ny “Miainga avy amin'ny Tomponao Ny Marina”. Na iza na iza te-hanao izany, dia aoka izy hino, ary na iza na iza te_hanao izany, dia afaka tsy mino izy”.
Mazava izany fa ny Koràna tsy manameloka ho faty na mikapoka velively ny fivadiham-pinoana na ny fitenenan-dratsy ny fivavahana. Na izany aza, misisika mafy manao ny mifanohitra amin'izany ireo manampahefana any amin'ireo firenena toa an'i Maoritania, Arabia Saodita ary Iràna. Mifàka lalina ao anatin'ny politika ny antony fa tsy noho ny resaka finoana.
“ireo governemanta arabo dia mitondra tena sahala amin'ny hoe tandindonin-doza ny finoana silamo… matahotra angamba izy ireo ny hirodanan'ny fanjakany,” hoy ny esoeson'ilay vehivavy toniziana bilaogera, Khaoula Frehcichi . “Tsapan'izy ireo tsara fa ny fitsikerana ireo antanantohatra ara-pivavahana dia dingana voalohany mankany amin'ny fanozongozonana ny fitondran'izy ireo.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/02/14/134273/
 voaheloka ho faty tao amin'ny toerana famonoana: http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/en-mauritanie-un-homme-condamne-a-mort-pour-apostasie_1635835.html
 Raha maneho hevitra: http://www.al-bab.com/blog/2014/december/mauritania-apostasy-game.htm#sthash.dc5TFugb.dpbs
 Arabs Without God: http://www.al-bab.com/arabswithoutgod/
 nanameloka blaogera iray, Raif Badawi: https://fr.globalvoicesonline.org/2015/01/12/180328/
 Souad al-Shammari: http://www.lesnouvellesnews.fr/index.php/civilisation-articles-section/civilisation/4151-etre-aussi-raif-badawi-et-souad-al-shammari
 lalàna iray izay hanasazy” ny fanohintohinana ny masina”?: http://www.hrw.org/fr/news/2012/07/04/un-revers-pour-la-libert-d-expression-en-tunisie
 toniziana bilaogera, Khaoula Frehcichi: http://taratil.arablog.org/2014/12/29/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B4-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84/